Museum of Toilets, Muzeum historických nočníků a toalet - Prague
Ny Museum of Toilets
Adiresy: Michalská 1, 110 00 Praha 1
Tel: +420 778 475 499
Ny renivohitry ny Repoblika Tseky dia nalaza foana ho an'ireo tranombakoka maro, anisan'izany ny tena tsy mahazatra. Ny iray amin'ireo dia ny tranom-bakoka tranainy ao Prague . Ny fampiratiana dia ahitana zavatra izay natokana ho an'ny fitantanana ny zavatra ilain'ny olona.
Tantaran'ny Museum of Toilets
Tamin'ny taona 2001, ny fianakavian'i Jan Sedlachekova dia nahazo fiarovana tranainy, izay tao amin'ny tanàna kelin'i Třebotov akaikin'i Prague. Rehefa vita ny fanamboarana, nisy zavatra mahaliana iray hita: trano fandroana medieval medieval. Tsy dia mahazatra loatra ilay fikarohana fa ian dia nanana ny hevitry ny famoronana tranombakoka misy toeram-pisakafoanana sy vazy alina. Ny famerenana tamin'ny laoniny ny trano dia vita tamin'ny taona 2003 ary nisokatra tamin'ireo mpitsidika ny varavarany. Nandritra ny 10 taona dia namboarina tamin'ny fampiratiana vaovao ny tranombakoka izay tao amin'ny fivarotana antikny, tamin'ny varotra ary na dia tamin'ny lafiny faharoa aza. Tamin'ny 2014, nentina nankao amin'ny tranobe iray hafa tao afovoan-tanàna ilay fampirantiana.
Inona no azonao jerena ao amin'ny tranom-bakoka ao Prague?
Ny mpitsidika ny tranom-bakoka dia hahita izay nampiasan'ny razantsika talohan'ny famolavolana ny efitra fandroana maoderina miaraka amin'ny tombo-kase. Eto ianao dia afaka mahita mihoatra ny 2000 ny endrika samihafa, varieties, loko sy loko. Izy ireo dia vita amin'ny hady sy ny pesta, aliminioma sy varahina, volafotsy ary volamena. Androany ny fanangonana ny tranombakoka no lehibe indrindra eran-tany.
Ao anatin'ireo fampiratiana maro dia afaka mahita zavatra tsy manam-paharoa izay manana ny tantarany:
Vehivavy am-bala vehivavy "burdalu". Io fitaovana io dia nampiasaina tamin'ny taonjato faha-18 tamin'ireo vehivavy mpanan-karena nandritra ny dia lavitra na ora maro nitorian'ny mpisorona. Eo ivelany, ity sambo ity, vita amin'ny pentina sy voaravaka sary hosodoko, dia mitovitovy amin'ny fanaka fisakafoanana. Saingy mba hanavahana ireo zavatra roa ireo, ireo tarehimarika kely dia napetraka eo amin'ny faran'ny urinal na maso miaraka amin'ny soratra milaza fa ny zava-mitranga rehetra eto dia ho voasarika.
Ny kaopy, vazy, sambo antsoina hoe kuttrolf amin'ny tendany ety dia nampiasaina tamin'ny ampahan'ny lehilahy tao anatin'ireo toe-javatra ireo rehefa tsy afaka niditra ny efitra fidiovana.
Napolage Napoleon Bonaparte miaraka amin'ny sarin'ny laurel brill.
Ny alina alim-pandringan'i Abraham Lincoln dia avy amin'ny efitra fatoriany manokana ao amin'ny Trano Fotsy.
Toetran'ny mpanjaka Shinoa Qianlong .
Toeram-pivoahana avy ao amin'ny trano fatoriana Titanic .
Toeram-pivoahana an-dàlambe miaraka amin'ny santsa isan-karazany, milalao mozika sns
Trondro namboarina namboarina avy amin'ny fiarovan-doha, izay nampiasain'ireo miaramila alemà nandray anjara tamin'ny Ady Lehibe II.
Fanangonana fitaovana fanondrahana sy taratasy fidiovana .
Ny endriky ny loha-hevitra samihafa , ohatra, ny kely indrindra ao amin'ny hopitaly misy lozam-pamokarana miaraka amin'ny 1 mm isam-bolana - izany dia singa volafotsy mampiavaka.
Ho an'ny tranombakoka mozika any Prague, andro manokana iray ny 19 Novambra, rehefa hankalaza ny Andro Iraisam-pirenena ny Toetoetry. Amin'ity indray mitoraka ity, ny fampiratiana manokana dia natsangana eto, ary koa ny fifaninana farany amin'ny sary sy tantara an-tsarimihetsika tsara indrindra.
Ahoana no hahatongavana any amin'ny vilia baolina any Prague?
Ho fitsidihana ny rafitra mahazatra, dia azonao atao ny mandeha eny an-dalàmbe # 3, 7, 17, 52. Tokony hiala ao amin'ny toby Výtoň ianao. Ny tranombakoka dia mihazakazaka isan'andro 10:00 hatramin'ny 18:00. Ny tapakila ho an'ny olon-dehibe dia mitentina 150 CZK, izay eo amin'ny $ 7, ny ankizy latsaky ny 6 taona dia ekena malalaka.
Museum of Folter (Prague)
Kianjan'ny Repoblika (Prague)
Ilaina ve ny zanaovavy?
Jennifer Lawrence dia nanam-potoana henjana tsy hianjera
Diaskintest na Mantoux?
Inona no atao hoe blender?
Ahoana no anampian'ny tarika Tabynskaya ny Renin'Andriamanitra?
Tondradrano ho an'ny fahavoazana lany - recipe
Ny rà no misy azy
Fifandraisana amin'ny fifandraisana
Compressor tsy misy dikany ho an'ny akquarium
Vemina City - Spring-Summer 2016
Fomba handaminana ady
Fihetseham-po avy amin'ny lavarangan'ny kodiarana
Fahavetavetana amin'ny rantsantanana ankavanan'ny tanana
Fialantsasatra miaraka amin'ny ankizy any Abkhazia
Ahoana ny fomba hisasarana ny zaza?